9 तरीका PST फाइल भ्रष्टाचार रोक्न को लागी - DataNumen
घर > उत्पादन > DataNumen Outlook Repair > PST फाइल भ्रष्टाचार रोक्न Pre तरिकाहरू
PST फाइल भ्रष्टाचार रोक्न Pre तरिकाहरू
आउटलुक PST फाईलहरू भ्रष्टाचारको खतरामा छन्। यसलाई रोक्न के कुनै तरिकाहरू छन्? उत्तर छ हो,! म तल सूचीकृत 8 मीost तपाईंको PST फाइललाई भ्रष्टाचार वा क्षतिबाट रोक्नको लागि महत्वपूर्ण तरिकाहरू:
तपाईको PST फाईल फुलाउँनुहुन्न। यद्यपि आउटलुक २००//२०० P ले अब PST फाईलहरूलाई २०GB भन्दा ठूलो समर्थन गर्दछ। र आउटलुक २०१० ले GB० जीबी समर्थन गर्दछ, यो अझै पनि सिफारिश गरिएको छ कि तपाईंको PST फाईल भन्दा ठूलो हुनुहुन्न 10GB, किनकि:
Most अपरान्ह PST फाईलसँग धेरै ढिलो छ
ठूला फाईलहरू बढी भ्रष्ट हुने सम्भावना छ।
यद्यपि केहि साना भ्रष्टताहरू आउटलुक वा स्क्यानस्ट द्वारा निश्चित गर्न सकिन्छ, यदि PST फाईल ठूलो छ, भने फिक्स प्रक्रिया अझै समय उपभोग हुनेछ।
आउटलुक २००-2003-२०१० ले अब धेरै PST फाईलहरू सँगै बाँया प्यानलमा खोल्न समर्थन गर्दछ। त्यसकारण, प्रत्येक PST फाईलको आकार घटाउनको लागि आउटलुक नियमहरूको साथ धेरै फरक फरक PST फाईलहरूमा तपाईंको ईमेलहरू सार्न सिफारिस गरिएको छ।
आफ्नो पुरानो ढाँचा PST फाइल दृष्टिकोण 2GB नदिनुहोस्। माइक्रोसफ्ट आउटलुक २००२ र अघिल्लो संस्करणहरू व्यक्तिगत फोल्डर (PST) फाईलको आकार २ जीबीमा सीमित गर्दछ। जब PST फाईल आकार २ जीबीको नजीक हुन्छ, तपाईंले भेरिएबल समस्याहरू भेट्टाउनुहुनेछ र PST फाईल भ्रष्टाचारको खतरामा छ। त्यसकारण, सँधै निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको पुरानो ढाँचा PST फाईल भन्दा कम छ 1.5GB राम्रो अभ्यास हो।
ईमेलको ठूलो मात्रामा अपरेट नगर्नुहोस्। माईक्रोसफ्ट आउटलुक डेड-लक हुनेछ यदि तपाईं एक पटकमा ठूलो संख्यामा ईमेलहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र डेड-लक पछि तपाईले अनौंठो आउटलुक बन्द गर्नुपर्नेछ जसले सम्भावित रूपमा PST फाईल भ्रष्टाचार गर्दछ। एक प्रयोगात्मक सीमा हो 10,000 ईमेलहरू। त्यसकारण, १०,००० भन्दा बढी ईमेलहरू चयन गर्न, सार्ने, प्रतिलिपि गर्ने वा मेटाउने प्रयास गर्दा तिनीहरूलाई एउटा ब्याचमा अपरेट नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा most एक पटकमा १००० ईमेलहरू, सबै ईमेलहरू प्रक्रिया नभएसम्म अपरेसन दोहोर्याउनुहोस्।
एक नेटवर्क ड्राइव वा सर्भरमा तपाईको PST फाईल भण्डार नगर्नुहोस्। PST फाईल स्थानीय कम्प्युटरहरूमा भण्डार गर्न डिजाइन गरिएको हो। यसलाई टाढाको ड्राइभ वा सर्भरमा नहेर्नुहोस् किनकि नेटवर्क वातावरणले PST फाईलको घन पहुँचलाई समर्थन गर्न सक्दैन र PST फाईल प्राय: भ्रष्टाचार उत्पन्न गर्दछ। नेटवर्कमा PST फाईल पनि साझा नगर्नुहोस् र बहु ​​प्रयोगकर्ताहरूलाई PST फाइलको उही प्रतिलिपि एक साथ नेटवर्क मार्फत पहुँच गर्न नदिनुहोस्, जुन भ्रष्टाचार फाइल गर्ने झुकाव हो।
आउटलुक बन्द नगर्नुहोस् जब यो अझै चलिरहेको छ। यदि तपाईं आउटलुक असामान्य रूपमा शट डाउन गर्नुहुन्छ जब यो अझै चलिरहेको छ, तब PST फाईल आउटलुकबाट पहुँच गरिएको त्यस समयमा सजिलै बिग्रेको हुनेछ। त्यसकारण तपाईले गर्नु पर्छ कहिल्यै टास्क प्रबन्धकमा असामान्य रूपमा आउटलुक बन्द गर्नुहोस्। कहिलेकाँही जब तपाईं आउटलुक बन्द गर्नुहुन्छ, यो अझै पृष्ठभूमिमा चल्नेछ, केहि कार्यहरू प्रक्रिया गर्न, जस्तै ईमेलहरू पठाउनुहोस् / प्राप्त गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा, कहिलेकाँही, तपाईं प्रणाली ट्रे मा एक सानो आउटलुक प्रतिमा देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, आउटलुक अझै चलिरहेको छ छैन निर्धारण गर्न उत्तम तरिका s होtart "कार्य प्रबन्धक" र जाँच गर्नुहोस् "OUTLOOK.EXE" मा छ "प्रक्रियाहरू" सूची (सूचीलाई क्रमबद्ध गर्नुहोस् तपाईंलाई यसलाई अधिक सजीलो भेट्टाउन मद्दत गर्न।)। कहिलेकाँही तपाईं आउटलुक सधैंको लागि स्मृति मा रहन पाउनुहुनेछ। यो सामान्यतया हो किनकि आउटलुकले नेटवर्क मार्फत ईमेलहरू पठाउन / प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेको छ र तपाईंको नेटवर्क सही ढ work्गले काम गर्दैन, त्यसैले आउटलुक अन्तहीन प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ वा टाईम-आउट भए पछि। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं आउटलुकको करीव शीघ्र विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं आउटलुकले मैन्युअल्ली प्रयोग गरेको नेटवर्क जडान असक्षम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछि, आउटलुक जडान चाँडै नै टाइम-आउट हुनेछ र यसले पृष्ठभूमि कार्यहरू रद्द गर्नेछ र चाँडै नै बाहिर निस्कन्छ। केहि अन्य केसहरूको लागि, यदि आउटलुक वा आउटलुक ट्रे अनन्तसम्म रह्यो भने, तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Restart आउटलुक, केहि मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस्, र त्यसपछि बाहिर निस्किनुहोस्, यस्तो प्रक्रियाले आउटलुकलाई प्रणाली पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन मद्दत गर्दछ।
सँधै निश्चित गर्नुहोस् आउटलुक तपाईको कम्प्युटरलाई शट डाउन / पावर डाउन गर्नु अघि बाहिर निस्किएको छ। Like जस्तै, यदि तपाईं आउटलुक छोडेर बिना आफ्नो कम्प्युटर शट डाउन वा पावर डाउन गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको PST फाईल सम्भवतः बिग्रिनेछ। यद्यपि यो थोरै असुविधा हो, सधैं यकिन गर्नुहोस् कि तपाईंको आउटलुक तपाईंको कम्प्युटर प्रणाली बन्द गर्नु अघि बाहिर निस्किरहेको छ। वा तपाइँ तपाइँको लागि स्वचालित रूपमा यो जाँच गर्न सानो अनुप्रयोग बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईको एन्टिभाइरस कार्यक्रमसँग सावधान रहनुहोस्। यदि तपाइँको PST फाईल ठूलो छ र यसले धेरै ईमेलहरू समावेश गर्दछ, र तपाइँको एन्टिभाइरस प्रोग्रामले यसको सुरक्षा गर्नेछ। त्यसो भए मिost तपाईंको PST फाईलमा ईमेलको साथ कार्यहरू तपाईंको एन्टिभाइरस प्रोग्रामले पनि प्रभावित गर्दछ। यदि कार्यक्रम ढिलो छ, तब अपरेशनहरू पनि ढिलो हुनेछ। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि केहि एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरूले PST फाईल बिगार्न सक्छन्। माइक्रोसफ्ट वनकेयरले PST फाईलहरू मेटाउन सक्दछ।
आउटलुक एड-इन्सको साथ सावधान रहनुहोस्। केही दोषपूर्ण आउटलुक ऐड-इनहरूले तपाईंको PST फाईल भ्रष्टाचार निम्त्याउन सक्छ यदि तिनीहरू सही रूपमा डिजाइन गरिएको छैन वा राम्रोसँग चलेको छैन भने। त्यसकारण कहिलेकाँही तपाईले एड-इन्स असक्षम गर्न आवश्यक छ यदि तपाईको PST फाईल बारम्बार बिग्रिएको हुन्छ।
तपाईको PST फाईलहरू साप्ताहिक आधारमा ब्याकअप गर्नुहोस्। ब्याकअप डाटा नोक्सान रोक्नको लागि उत्तम तरिका हो। तपाईको PST फाईलहरू सँधै सामयिक रुपमा ब्याकअप गर्नुहोस् ताकि जब तपाइँको PST फाईल बिग्रेको हुन्छ र पुन: प्राप्ति गर्न सकिदैन, तपाईले पछिल्लो ब्याकअप पुन: भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको PST फाईलहरू बिग्रेको छ भने, निम्न उपकरणहरूसहित यसलाई मर्मत र फिक्स गर्न अझै सम्भव छ:
Scanpst.exe। पनि भनिन्छ इनबक्स मर्मत उपकरण। यो तपाईंको आउटलुकको साथ स्थापित एक स्वतन्त्र उपकरण हो। यसले m लाई ठीक गर्न सक्दछost तपाईंको PST फाईलहरूमा साना त्रुटिहरू र भ्रष्टताहरूको। अधिक विस्तृत जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ यहाँ.
DataNumen Outlook Repair। यदि Scanpst तपाईंको PST फाईल फिक्स गर्न सक्दैन, वा तपाईंले चाहानु भएको ईमेलहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, त्यसो भए तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Outlook Repair। यो धेरै नराम्ररी बिग्रिएको PST फाईल पुन: प्राप्ति गर्न सक्दछ। जब सम्म कुनै भ्रष्ट PST फाईलमा कुनै आउटलुक डाटा अवस्थित छ, तबसम्म DataNumen Outlook Repair तिनीहरूलाई पुन: प्राप्ति गर्न सक्दछ र नयाँ निश्चित PST फाईलमा बचत गर्न सक्दछ।
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 सेप्टेम्बर 2, 2021 मा जारी गरिएको छ